Falanqaynta Shirkii Golaha Qaramada Midoobay ,fursadaha Diblomaasiyadeed ee Somaliland u furan iyo Qorshaha laga Sugayo Xukuumadda Horudhac. |
Falanqaynta Shirkii Golaha Qaramada Midoobay ,fursadaha Diblomaasiyadeed ee Somaliland u furan iyo Qorshaha laga Sugayo Xukuumadda Horudhac.
Golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay (UN General Assembly) waa Mid ka mid ah lixda Xubnood ee Qaramada Midoobay ka kooban tahay, waana Golaha kali ah ee Dhamaan Xubnaha Dalalka caalamku ay ku leeyihiin wakiilo siman (equal representation). Awoodaha ugu muhiimsan ee uu leeyahay Goluhu waxa ugu horeeya Miisaaniyadda Qaramada Midoobay, Wuxuu cod gacan taag ah ku doortaa 10ka dal ee aan Joogtada ku ahayn Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay (Non-permanent members to the security council) oo labadii sanno ba hal mar la bedelo, Wuxuu si toos ah u helaa Warbixin ka timaada Dhamaan Goleyaasha kale ee Qaramada Midoobay. Sanad walba bisha September ayuu fadhiistaa iyagoo ay ka soo qayb galaan badi Hogaamiyayaasha Dalalka caalamku ama wakiilo matalaya halkaasi oo khudbado laga jeediyo isla markaana lagu falanqeeyo xaaladaha Dunidu ku sugan tahay. Shirkii ugu horeeyey ee Golaha loo dhan yahay fadhistay waxa uu ka qabsoomay 10kii January sanadkii 1946kii magaalada London ee caasimada u ah wadanka Boqortooyada Ingiriiska iyadoo ay ka soo qayb galeen 51 Dal.
Sanadkan 2016 waa sanad xiiso badan ku leh Siyaasadda caalamka, gaar ahaan Bilaha soo socda oo ay dhacayaan Dooroshada Madaxweynaha Maraykanka oo ah Dalka Xaruntiisu ay tahay Qaramada Midoobay iyo weliba dalka haatan Siyaasad ahaan iyo Dhaqaale ahaanba Dunida Hogaanka u haya iyo weliba Dooroshada Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay oo loolan adag oo diblomaasiyadeed loogu jiro. Sidoo kale sanadkan Wuxuu ahaa mid aad u xiiso badan marka Siyaasadda caalamiga ah la eegayo oo Midnimadii Dunida ugu casrisanayd ee Yurub ayaa dhaawac adag soo gaadhay markii Ingiriisku maalin cad ka baxay Midowga Yurub.
Qaxoontiga Dunida, Tahriibka badweynta caalamiga ah ee Mediterranean sea, la dagaalanka Argagixisada, Gargaarka Bani Aadanimada, Xaalada Dalka Suuriya, Amaanka Dunida iwm ayaa ahaa Qodobada ugu waaweyn ee shirka sanadkan si weyn loogu falanqaynayey.
Khudbadii Raiisal Wasaaraha Ingiriiska.
Theresa May oo ay ahayd markii ugu horaysay ee shirkan caalamiga ah ay ka qayb gasho ayaa ka jeedisay khudbad dheer oo taariikhi ah isla markaana aad u xiiso badnayd, waxay khudbadaasi taabatay dhinacyo badan oo ku Aadan Amuuraha Dunida ee Dhinacyada Amaanka, Dhaqaalaha iyo isbedelka cimilada. Qaxoontiga ayey si weyn uga hadashay iyadoo soo jeedinaysay in dedaalo hor leh la sameeyo si Gargaar weyn loogu fidiyo dadka Qaxoontiga ah iyo Dalalka Qaxoontiga Magan galyada siiya intaba.
Waxay ka hadashay Amaanka caalamiga ah iyadoo xustay in loo baahan yahay in Dalalka Soomaaliya iyo Yemen si weyn looga taageero dhanka Amaanka, waxana ay xustay in Dawladda Ingiriisku ay ku talo jirto inay Ciidamo u dirto dalalkaasi. Wakhtigan ayaa ciidamo aan badnayn ka joogaan Ingiriiska dalka Soomaaliya waxana la filayaa in kuwa dheeraadka ahi iyo kuwan hada joogaba ay tababaro siin doonaan hawl galka Midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ee ku Aadan la dagaalanka Argagixisada. Mrs. May waxay sidoo kale shaacisay shirweyne caalami ah oo Amuuraha Soomaaliya looga hadlayo oo sanadka soo socda ee 2017 ay martigelin doonto isla markaana si weyn loogu nuuxnuuxsan doono xaalada Dalkaasi Soomaaliya. Mrs. May waxay shirka ka shaacisay Boqolaal Billion oo lacag ah oo lagaga hortagi doono Argagixisada iyo qaybo kale oo lagu bixin doono joojinta socdaalka sharci darada ah ee Muhaajiriin tiro badani ku imanayaan Qaarada Yurub.
20 Million oo Poundka Ingiriiska ah ayaa Ingiriisku shaaciyey inuu ku bixin doono Qaxoontiga Soomaaliya ee Kenya jooga si loogu celiyo Dalkooda, sidoo kale 80 Million oo Pound ayey shaacisay inay ku bixin doonto Abuurista Shaqooyin 30,000 kor u dhaafayaa oo dalka Itoobiya ku waajahan, iyadoo barnaamijkan shaqo Abuurista uu yahay mid ay ka qayb qaadanayaan Midowga Yurub iyo Baanka Aduunka.
Amuuraha ay khudbada ku soo hadal qaaday waxa ka mid ahayd Go’aankii reer Ingiriis ka qaateen Midowga Yurub “Shacabka Ingiriiska ahi markii ay go’aansadeen inay ka baxaan Midowga Yurub, Umay codayn inay ka baxaan caalamka kale, waxaanu si ahaan doonaa saaxiib caalami ah oo Halbawle ka ah Dedaalada caalamiga ah ee khuseeya Nabadgelyada iyo Barwaaqada dadyowga Dunida ku nool”
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki Moon oo soo gabagabeeyey Muddo xileedkiisa waxa uu sanadkan khudbadiisa u adeegsaday inuu luuqado adag ku cambaareeyo Dawladda Suuriya
Kulamada goosgooska ah (sideline meetings).
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama oo soo gabagabaynayaa dhawaan muddo xileedkiisii 8da sanno ahayd ayaa kulan la wada sugayey la qaatay Raiisal Wasaaraha Israel Benjamin Netenyahu kaasi oo aad loogu nuuxnuuxsaday xaalada caalamka, Israel ayaa si weyn uga mahadnaqday taageerada Dhanka Milatariga ee dhawaan ay labada dawladood kala saxeexdeen oo soconaysa muddo 10 sanno ah isla markaana ku kacaysa ilaa $38 Billion oo Lacagta Maraykanka ah taas oo noqonaysaa Lacagtii ugu badnayd abid ee taageero milatari ee hal mar ay kala saxeexdaan. Labada hogaamiye waxay ku tilmaameen xidhiidhka ka dhexeeya mid aan la burburin karin oo leh dabaro aan la burburin karin (Unbreakable bonds). Amuuraha Bariga dhexe iyo Amaanka caalamiga ahi waxay ahaayeen qodobo muhiim aha oo kulankan la iskula soo hadal qaaday isla markaana la isku afgartay.
Kulankan ayaa ahaa kii ugu horeeyey ee dhex maray intii ka dambaysay xurguftii Diblomaasiyadeed ee labada dal dhex martay ee sababtay in Netenyahu uu Washington kula hadlo Mudanayaasha Aqalka Congress ka isagoo aan casuumad ka haysan Aqalka cad ee Maraykanka, balse waxa ka muuqday astaamo diblomaasiyadeed oo muujinayaa in labada dal aad isugu dhaw yihiin wakhtigan Amuuro badan oo jira awgeed.
Khudbada Madaxweyne Obama oo ahayd tii ugu dambaysay ee uu ka jeediyo Golaha waxa uu caalamka ugu yeedhay inay gurmad ka geystaan Qalalaasaha Qaxoontiga Dunida ee ugu badnaa caalamka tan iyo Dagaalkii labaad ee Dunida, waxana uu ka hadlay isbedelka cimilada iyo Dedaalada Horumarinta caalamiga ah. waxa uu ka hadlay Dagaalkii Qaboobaa ka dib iyo xaalada caalamka “Rubuc qarni ka dib Dagaalkii Qaboobaa, Aduunyadu waxay noqonaysaa mid rabshaduhu yaraanayaan isla markaana soo barwaaqoobaysa.”
Somaliland iyo Shirka Golaha loo dhan yahay?
Dhawaaqa Raiisal Wasaare Theresa May ay ku shaacisay inay Soomaaliya u qabanayso Shirweyne caalami ahi sanadka soo socda waxa uu mudan yahay ka fiirsi badan. Somaliland waxay ka qayb gashay Shirweynihii caalamiga ah ee 2012kii Ingiriisku u qabtay Soomaaliya, Guushii ay kala soo hoyatay na ugama ay faaidaysan sidii ay ahayd. Waxana ay sababtay in wada hadaladii loogu baaqay Somaliland iyo Soomaaliya hal mar ku fashilmaan Gacanta Turkiga oo aan la ogayn Goorta uu amuurahan wax ka bartay. Inkastoo Somaliland ay waajahayso Dooroshooyinka Madaxtinimada horaanta Sanadkan hadana waxa laga sugayaa Wasaaradda Arrimaha Dibada Somaliland inay wakhtigan sii bilowdo inay amuuraha shirka ay deristo isla markaana indho waaweyn ku eegto qaabka shirkan loo soo qabanqaabinayo iyo hawlaha ku soo waajahan labadaba si ay Mawqif cad uga qaadato.